karaoty - magazine "Potato System"
Tena Label karaoty
Azo ahena ny zezika azota amin'ny famokarana karaoty
Ny tahan'ny azota tsara indrindra ho an'ny karaoty amin'ny sehatra manokana dia mety ho ambany lavitra noho ny tolo-kevitra eken'ny rehetra. Ity no fehin-kevitra noraisin'ny mpahay siansa ao California ...
Ny karaoty tara dia mijinja any amin'ny faritr'i Volgograd. Ao amin'ny iray amin'ireo toeram-pambolena ao amin'ny distrikan'i Sredneakhtubinsky, ny milina fambolena vaovao dia manampy amin'ny fanafainganana ny asa an-tsaha. ...
Ny fiotazana legioma vita tany amin'ny faritr'i Kostroma
Nahavita ny fiotazana anana eny an-tsaha ny tantsaha Kostroma. Avy amin'ny velarantany 368 hektara, laisoa 3,7 arivo taonina, 4 arivo taonina ...
Any amin'ny faritr'i Yaroslavl, efa hifarana ny hetsika fijinjana. Ankehitriny ny vidin'ny legioma any amin'ny faritra Yaroslavl, anisan'izany ny "borscht set", ...
Ny karazana ovy vaovao ho an'ny famokarana fries. Loko ambany, kely acrylamide
Niezaka nitondraka ovy niaraka tamin'ny nematode tany amin'ny faritr'i Kursk izy ireo